Njem | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Ebee ka Qatar dị? Nkowa nkenke nke ala
E nwere otu ụdị nke ndị mmadụ na-enwe mmasị ịga njem. Ha na-agbasi mbọ ike ileta ebe ọhụrụ na ụwa anyị. E nwere otu ebe dị n'eluigwe n'ezie. Ọ bụ obodo dị ntakịrị ma dị egwu nke a na-akpọ Qatar. Ọkwa ...
Chunja mmiri iyi - ebe pụrụ iche iji weghachi ịdị mkpa
Kazakhstan nwere ọtụtụ ebe dị ịtụnanya ma bụrụ ebe pụrụ iche nke ị ga-eleta n'oge nleta gị na mba a. Otu n'ime ebe ndị a bụ obere obodo Chundzha. Kedu ihe bụ ...
Oké osimiri nke Azov: n'ụsọ oké osimiri, àgwà, atụmatụ
N'ebe ọwụwa anyanwụ nke Europe, n'ọdụ ụgbọ mmiri dị nso (steppe na ọhịa-steppe zone) n'etiti ebe ndịda Ukraine, mpaghara ọdịda anyanwụ nke Russia na n'akụkụ ugwu nke oke peninsula Crimea, Oké Osimiri Azov dị. Okuku mmiri, ma obu kama akụkụ ya, ...
Miami, FL: ebe nkiri, foto. Ememe na Miami, FL
Taa, anyị na-aga obodo Miami (Florida). Obodo a, dị ka ala dum dị na America, a na-ewere dị ka ebe isi obodo dị. Ihe di oke egwu, oke osimiri ndi mara nma, ihe di ebube na akuko akuko, ...
Ebee ka ije ije n'oge oyi na Moscow? Kedu ihe isi obodo snow ahụ yiri? Ebe na nlegharị anya obodo
Ọtụtụ mmadụ na-abịa n'isi obodo ahụ iji chọpụta isi ihe ndị dị na Moscow. Na oyi, dịka n'oge ọ bụla ọzọ nke afọ, ị nwere ike ịhụ ihe ndị a ma ama nke Red Square, gaa na Bolshoi Theatre na ndị ọzọ ...
Kedu esi esi Salou gaa Barcelona? Kedu ihe dị anya site na Salou na Barcelona na ego ole ka ọ ga-eri?
Salou bụ ọdụ kachasị ewu ewu na mmiri Spanish nke Costa Dorada. O kwesịrị ekwesị maka ezumike ezinụlọ na ndị ntorobịa agụụ mmekọahụ na-ahụ n'anya na ndị na-ahụ n'anya ịhụnanya. Ogige Port Aventura bụ nnukwu…
Junior Suites: gini ka ọ bụ?
Ụfọdụ n'ime anyị na-ezukọkarị ụdị okwu Junior Suites. Kedu ihe ọ bụ? Ikwesiri imata na a kpọrọ otu n'ime ụlọ nke ụlọ na họtel. Kwa afọ, ewu ewu nke mba ọzọ ...
Nkwekorita nke Oke osimiri - bu osimiri kacha ibu n'ụwa
Shipgbọ mmiri “Ijikọ Oké osimiri” bụ ụgbọ mmiri kacha ibu n'ụwa taa. Nnukwu osisi ousa a ruru mita 362,12 na ogologo na mita 66 n’obosara. Heightdị elu ya ...
Mkpọmiso Moscow metro ọhụrụ na ICR: ọ ga-adịrị mfe ịkwaga?
Metro na-agbanwe mgbe niile. A na-ewu ụlọ ọhụrụ na eriri ọhụrụ. Nke a na-enye gị ohere ijikọta akụkụ dị iche iche nke obodo na nke dịpụrụ adịpụ n'otu netwọk njem. Metro na-enye gị ohere ngwa ngwa site n'otu ebe gaa ...
Ezumike ọzọ: Ọhụrụ na Iwu
Ndị na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na Russian Federation dịka iwu obodo si nwee ikike ezumike mgbe niile. Ndokwa ndị dị na ndokwa nke oge ezumike na-achịkwa site na 114-128 nke Usoro Ọrụ nke Russian Federation. Art. 122 na-emesi ikike iji ...
Waterpark "Baryonyx": ọnụahịa na nyocha. Waterpark na Kazan "Baryonyx"
Na Kazan, ị nwere ike ịchọta ebe ntụrụndụ na-atọ ụtọ. Ndị obodo ahụ na-amachaghị ebe ị ga-aga na ngwụsị izu. Ọ na-esiri m ike ịhọrọ ebe ị ga-eso ezinụlọ gị dum gaa. Otu n'ime ...
Ebee ka ị ga-enweta mkpịsị aka maka visa Schengen? Iwu ọhụrụ maka inweta visa Schengen: mkpịsị aka
Site na 14 September 2015, ụmụ amaala Russia ga-ewere mkpịsị aka maka visa Schengen. A na-achọ ntinye nke data biometric maka mmadụ niile. A na-eme usoro maka mkpịsị aka na consulates ikike site na visa emmepe nke states ...
Pagbọ elu Anapa - Vityazevo Airport. Foto, adresị, anya
Vityazevo bụ ọdụ ụgbọ elu nke mbụ na-etiti mba dị mkpa, nke dị na Territory Krasnodar. Adreesị Na-anọ n'obodo Anapa, Ọdụ Ụgbọ mmiri Vityazevo dị kilomita ise site na ọdụ ụgbọ okporo ígwè Anapa (ebe mgbagwoju anya dị n'ebe ugwu), site na ...
Ilmen (ọdọ): ntụrụndụ, ịkụ azụ na nleta nleta
N'ebe ugwu ọdịda anyanwụ nke East European Plain na-agha ụgha na ọdọ mmiri ọdọ Ilmen. Obodo Novgorod, nke dị n'ebe ọdịda anyanwụ ya, ókèala na obodo Pskov na Tver na-adọrọ mmasị maka ndị njem nleta, ndị ọkụ azụ na ...
Kedu ihe bụ multivisa? Esi nweta multivisa Schengen
Ndị na-agakarị mba ọzọ chọrọ ịma ihe multivisa bụ. Nke a bụ akwụkwọ ikike akwụkwọ ntinye, nke ga-abanye oge ole na ole ịbanye n'ókèala nke mba ọzọ. N'agbanyeghị eziokwu na ...
Nnukwu ọdụ ụgbọ elu kasị elu n'ụwa. Ọdụ ụgbọelu kasị ukwuu na Russia. Ebe ọdụ ụgbọelu kasị ukwuu na Europe
Ụzọ dị ogologo na-ewe ọtụtụ ume, n'ihi ya, ndị mmadụ na-arịwanye elu na ọrụ ụgbọelu. Ọtụtụ mgbe, onye njem na-eche ọnọdụ ihu mgbe ụgbọelu ya egbu oge. Ma ndị nnọchianya nke ụgbọelu kwesịrị inye onye ahịa ihe oriri, ...
Ka anyị kwuo banyere kilomita ole na ole site na Rostov na Crimea
Ajụjụ nke kilomita ole na ole site na Rostov na Crimea nwere ezigbo mkpa megide ihe kpatara ọgba aghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị na Ukraine na mmalite afọ a. Na Crimea peninshula e webatara n'ime Russia ...
Kedu asụsụ a na-asụ na Canada: Bekee ma ọ bụ French?
Canada bụ steeti na North America na-eme ka ọdịbendị na asụsụ dị iche iche dịrị n'otu. N'akụkụ ya, mba ahụ na-anọchi nke abụọ mgbe Russia gasịrị. Mmetụta nke esemokwu ahụ na ụwa oge a Kwa afọ, ọbụghị ndị mmadụ bịara ebe a ...
Bangladesh ... Mba mba a? Ebee ka ọ dị?
“Bangladesh? Kedu mba bụ mba a? Ebee ka ọ nọ? ” - Ajụjụ nke atụmatụ dị otú a nwere ike ịnụ ugboro ugboro. Agbanyeghị, ọ nweghị mkpa iji ọsọ gbakwasị ndị nwere mmasị na agụ ọgụgụ ala. Kwere, obere steeti a nwere ike…
Ụlọ na-agba agba na Moscow: nchịkọta, atụmatụ na nyocha ndị njem nleta
Agbamakwụkwọ bụ ihe omume a na-eme n'ọ̀kwù. Agbanyeghị, ọ bụghị naanị ụbọchị agbamakwụkwọ kwesịrị ịbụ ihe pụrụ iche maka ndị lụrụ di na nwunye ọhụrụ, kamakwa abalị mbụ agbamakwụkwọ. Idobe onodu nke oge a zuru oke…
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 1,047.